इच्छा खबर | | हरपलको खवर
कुरिनटार-चितवन प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह लुकीछुपी बसीरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको विशेष टोलीले उनीहरुलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गर्न सफल भएको हो । …
कुरिनटार,१५ असार । चितवनको इच्छाकामना ४ कुरिनटारमा अवस्थित सर्वशान्ति माध्यामिक विद्यालय कुरिनटारले पहिलो पटक विद्यालय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय सम्म आउजाउका लागि सहज बनाउन विद्यालय बस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । बस सेवाको आज गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर…
काठमाडौं : दही चिउरा खाएर असार आज १५ मनाइँदै छ । यो दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो दिन खेतमा धान रोपिन्छ । किसानले हिलो खेल्दै खाजा खाने समयमा दही चिउरा खाएर…
काठमाडौं : दही चिउरा खाएर असार आज १५ मनाइँदै छ । यो दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो दिन खेतमा धान रोपिन्छ । किसानले हिलो खेल्दै खाजा खाने समयमा दही चिउरा खाएर असारे भाकाको गीतमा रमाउने पुरानो प्रचलन छ । वैद्यराज सुवर्ण…
कुरिनटार-चितवन प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ...
कुरिनटार,१५ असार । चितवनको इच्छाकामना ४ कुरिनटारमा अवस्थित सर्वशान्ति माध्यामिक...
कसरी तयार गर्ने हो धानको व्याड , बीउ कसरी राखिन्छ...
काठमाडौं : दही चिउरा खाएर असार आज १५ मनाइँदै छ...
कुरिनटार,१५ असार । चितवनको इच्छाकामना ४ कुरिनटारमा अवस्थित सर्वशान्ति माध्यामिक विद्यालय कुरिनटारले पहिलो पटक विद्यालय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय सम्म आउजाउका लागि सहज बनाउन विद्यालय बस सञ्चालनमा…
काठमाडौं : दही चिउरा खाएर असार आज १५ मनाइँदै छ…
चितवन : चोरीका मोटरसाइकल सहित दुई जना पक्राउ परेका छन्…
तनहुँ : सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना तनहुँद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा…
कुरिनटार,१५ असार । चितवनको इच्छाकामना ४ कुरिनटारमा अवस्थित सर्वशान्ति माध्यामिक विद्यालय कुरिनटारले पहिलो पटक विद्यालय बस सञ्चालनमा…
काठमाडौं : दही चिउरा खाएर असार आज १५ मनाइँदै छ । यो दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका…
चितवन : चोरीका मोटरसाइकल सहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर…
कसरी तयार गर्ने हो धानको व्याड , बीउ कसरी राखिन्छ ! रोपाइँ नदेख्ने जनहरुको फेसबुकमा, हिलै फोटा देखिन्छ !! सत्यलाई लत्याउदै मानव किन , देखावटीमा रमाउछन् ! आफ्नो खेत बाजो राखी रोपाइँको, शुभकामना टक्याउछन् !! गोबरदेखि सात कोष पर भाग्ने,…
जन्मघरकी सुन्दरी परीतीमी जाँदैछौं पराइ घर। बाबा आमाको काखमा हुर्कि बदलियो गोत्र थर। कस्ता छन् सासु ससुरा…